Ntughari: Otu Amazon Repricing si arụ ọrụ na ogologo oge ọ na-ewe | Martech Zone
Mọnde, Febụwarị 15, 2016 Tọzdee, Febụwarị 18, 2016 Douglas Karr
Amazon kwuru na ndị ahịa na-ere n'ahịa ya gụrụ 45% nke nkeji rere na nkeji nke abụọ nke 2015, site na 41% afọ gara aga. Site na ọtụtụ nde ndị na-ere ahịa na-ere ọtụtụ ijeri ngwaahịa na saịtị azụmahịa dị ka Amazon, ndị na-ere ahịa na-erite uru site n'ịgbanwe ọnụego ha ka ha wee nwee ike ịsọ mpi ma nwee ike ị nweta uru. Ntughari bu uzo nke iji ego eme ihe iji nweta otutu ahia.
Gịnị na-akpaghị aka repricing?
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ sistemụ, agbanyeghị, ọ siri ike ịnakọta data dị mkpa n'ofe ugwu ngwaahịa wee bulie ma ọ bụ belata ọnụahịa ahụ dịka mgbanwe si dị n'etiti ndị na-asọ gị. Akụrụngwa na-akpaghị aka apụtawo dị ka nnukwu ego maka ndị na-ere ahịa iji setịpụ iwu ha ma kwe ka usoro ahụ gbanwee ọnụego dịka ọ dị mkpa.
NtughariExpress bụ otu n'ime ngwaọrụ ndị ahụ, ha ewepụtala etu Amazon Repricing si arụ ọrụ yana ogologo oge ọ ga-ewe.
Ntugharị amalite mgbe otu n'ime ndị na-ere ahịa 20 maka ihe ziri ezi gbanwere ọnụahịa ha, na-ejikwa oge, ọnụahịa mbupu, ma na-enye.
Amazon eziga ozi na RepricerExpress na ọnụahịa, zipụ na ozi ere maka ndị kachasị ere 20.
NtughariExpress nyocha elu 20 na-ere ákwà ozi na-agba gị repricing megide ha, ịgbakọ ọhụrụ gị price.
NtughariExpress na-eme nyocha na ọnụahịa ọhụrụ iji hụ na ọ dị n'ime opekata mpe (ala) na nke kachasị (n'uko).
Ozugbo kwupụtara, NtughariExpress uploads price ọhụrụ na Amazon maka nhazi.
Amazon Sistemụ ricgwọ ricgwọ achọpụtazi ọhụrụ price megide gị Amazon Seller Central akaụntụ kacha nta na kacha ahịa.
Ozugbo e kwupụtara ọnụahịa gị, edepụtara ya dị ka ọnụahịa gị ugbu a. Ntughari a niile na-aga n'ihu n'ime oge 24, ụbọchị asaa n'izu.
Tags: amazon na-akwụghachiamazon repricing ngwá ọrụụgwọ ụlọọnụahịa alaọnụego kacha eluopekempe ọnụahịaSistemụ ricgwọ ricgwọrepricerrepricerexpress